Baarlamaanka oo loo qeybiyay miisaaniyadda sanadka 2016-ka – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo loo qeybiyay miisaaniyadda sanadka 2016-ka
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa loo qeybiyay miisaaniyada sanadka 2016-ka, si ay u meelmariyaan.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maalliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Xayir Ibraahin oo Xildhibaannada Baarlamaanka u hor yimid akhrinta Miisaaniyadda dowladda sanadka 2016ka ayaa tilmaamay in Miisaaniyaddan ay ka kooban tahay dakhli iyo deeq. isla markaana xaga isticmaalka kharashka aanay waxba ka duwaneyn sanadkii hore ee 2015 Miisaaniyaddii ay dowladdu isticmaashay.
Guddoomiye ku-xigaanka labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad Cabdala Cawad ayaa Xildhibaanada u sheegay in guddiga miisaaniyadda loo gudbin doono warbixinta ay soo gudbiyeen Wasaaradda maalliyadda, waxaana uu intaa ku daray in Mudanayaashu aysan xilligan ka dooni doonin, balse loo gudbin doono guddiga maalliyada ee baarlamaanka si ay wax ka badal ugu soo sameeyaan, ayna dib ugu soo celiyaan baarlamaanka.
Dhinaca kale Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulankooda maanta ku guda galay akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka Sharciga been Xalaaleynta lacagaha iyo maalgelinta argagixisada.
Guddoomiyaha Guddiga Maalliyadda ee Baarlamaanka Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh ayaa baarlamaanka u sharxay faa’iidada uu sharciga u leeyahay.
Inkasta oo Baarlaamanka maanta loo qeybiyay miisaaniyadda ay dowladda isticmaali doonto sanadka 2016-ka, si ay u ansixiyaan, waxaana sidoo kale mudanayaasha loo qeybiyay xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2015-ka.
Wasiirka difaaca oo ka hadlay horjooge ajnabi ah oo isu soo dhiibay ciidanka XDS